Fitaovana mandeha amin'ny laoniny Manome marika orinasa milina | China Automotive Parts Laser Marking Machine mpanamboatra, mpamatsy
Ampiasaina manokana hanamarihana ny volan'ny turbocharger, hanamarina ny kalitaon'ny kaody ary hanatanterahana ny fizahana ny leakage amin'ny singa. Ny masinina dia tsy maintsy tafiditra tao anaty tsipika famokarana ary nifandray tamin'ny tobin'ny mpanjifa.
Ampiasaina manokana ho an'ny sokitra vy maotera, ny halalin'ny sokitra indrindra dia manodidina ny 0,5mm. Ny sary dia mbola hita miharihary aorian'ny fizotry ny maro. Ny savaivony azo ampiharina dia 33mm-650mm
Ampiasaina manokana amin'ny sokitra vy maotera, ny halalin'ny sokitra indrindra dia manodidina ny 0,5mm. Ny sary dia mbola hita miharihary aorian'ny fizotry ny maro. Ny savaivony azo ampiharina dia 50mm-520mm
Die Castings Laser Manamarika Machine
Nampiasaina manokana tamin'ny laser fanamarihana kaody DataMatrix sy tadin-tsoratra amin'ny casting amin'ny die, miaraka amin'ny rafitra famokarana avo lenta izay afaka niara-niasa tamin'ny robot ary nanamarina ny kalitao aorian'ny fanamarihana kaody.
Ity dia marika laser namboarina miaraka amina lohany fanamarihana roa, natao ho an'ny liner varingarina vita sokitra, manatsara ny fotoana fanamarihana ary mampihena ny fotoana iva. Ny savaivon'ny liner dia eo anelanelan'ny 33mm sy 118mm.
Masinina fanamarihana laser an'ny profil aluminium BL-MA30A
Ny milina dia ampiharina indrindra hanamarihana ireo mombamomba ny aliminioma amin'ny tsipika, tafiditra ao anaty rojom-pamokarana goavambe. Ny halavan'ny vokatra dia manodidina ny 3.1 metatra, voamarika isaky ny 5mm. Ny tsipika famokarana dia manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 metatra isa-minitra.